ကလေးထိန်းအစ်မကြီးက အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ ဝမ်းနည်းစွာငိုခဲ့တဲ့ ကလေးမလေး...! - Thadin
[ May 20, 2019 ] Google က ဟာဟွေးနှင့် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း၊ Huawei ဖုန်းဆက်များတွင် Gmail၊ Google Play Store အပါအ၀င် Google ၀န်ဆောင်မှု အသုံးပြု နိုင်မည်မဟုတ်၊ မြန်မာ Huawei ဟန်းဆက်သုံးသူများလည်း ထိခိုက်မည်…! NEWS
[ May 20, 2019 ] (၈) နှစ်လောက်နာနေတဲ့ ဒူးကို (၅)ရက်လောက် ဆေးစည်းလိုက်တာနဲ့ ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ ဆေးနည်း…! HEALTHY
HomeNEWSကလေးထိန်းအစ်မကြီးက အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ ဝမ်းနည်းစွာငိုခဲ့တဲ့ ကလေးမလေး…!
ကလေးထိန်းအစ်မကြီးက အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ ဝမ်းနည်းစွာငိုခဲ့တဲ့ ကလေးမလေး…!
March 14, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ကလေးထိန်းအစ်မကြီးက အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ ဝမ်းနည်းစွာငိုခဲ့တဲ့ ကလေးမလေး…!
ယခင်က သတင်းမီဒီယာတွေထက်မှာ ကလေးထိန်းတွေ၊ အိမ်အကူတွေနဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကြားက ပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ မကြားချင်မှအဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်အကူတိုင်း၊ ကလေးထိန်းတိုင်း ကောင်းတယ်လို့ မထောက်ခံရဲသလို၊ အလုပ်ရှင်တိုင်းကလည်း အိမ်အကူတွေကို ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံပါ့မယ်လို့ ဘယ်သူမှ အာမခံချက် ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ယခင်က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကလေးထိန်းတစ်ဦးဟာ ကလေးမိဘတွေမရှိခိုက်၊ အားရပါးရ ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့လို့၊ ကလေးသေဆုံးခဲ့ရဖူးသလို၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ မြန်မာအိမ်အကူမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အမျိုးမျိုး နှိပ်စက်တဲ့ အိမ်ရှင်လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတော့ ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ လူတိုင်းရဲ့မတူညီတဲ့ အကျင့်စာရိတ္တတွေက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေပါ။
အခုလည်း ကလေးထိန်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက် သူမရဲ့ဇာတိကို ပြန်စရာရှိလို့၊ အိမ်ရှင်တွေနဲ့ သူမ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့ သမီးလေးတို့က လေဆိပ်အထိ လိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ကလေးထိန်းအမျိုးသမီးဟာ aရှာင်တခင် ပြန်စရာရှိတာကြောင့် လေယာဉ်နဲ့ခရီးထွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို သမီးလေး ကလေးထိန်းအမျိုးသမီးကို ငိုယိုပြီး နှုတ်ဆက်နေတာပါ။
ကလေးမလေးဟာ နောက်တစ်ကြိမ် သူမချစ်တဲ့ ကလေးထိန်း အမျိုးသမီးကို မတွေ့ရမှာ စိုးနေပုံရပါတယ်။ အပြီးအတိုင် ပြန်တာမျိုးတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ သူတို့တစ်တွေ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောတော့ ကလေးမလေး အားရပါးရ ငိုကြွေးနှုတ်ဆက်တဲ့အတွက်၊ အိမ်အကူအမျိုးသမီးခမျာ မျက်ရည်မဆည်နိုင်ဖြစ်ပြီး၊ သမီးလေးကို ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်နေတာ၊ မြင်ရသူကို မျက်ရည်မဆည်နိုင် ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် ဒီအိမ်အကူအမျိုးသမီးကို ကလေးမလေးက ဘယ်လောက်အထိ သံယောဇဉ်ရှိတယ်၊ သူမရဲ့ အလုပ်ရှင် ဇနီးမောင်နှံကလည်း သူမကို ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဆိုတာထက်၊ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်နဲ့မခြား ပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကို မြင်သာစေမှာပါ။ မူလသတင်း Web မှာတော့ ဒီသတင်းလေးကို မဖတ်ခင်၊ မျက်ရည်သုတ်ဖို့ တစ်ရှူးရှာထားကြဆိုပြီးတော့တောင် ညွှန်းဆိုထားပါတယ်။
ယခငျက သတငျးမီဒီယာတှထေကျမှာ ကလေးထိနျးတှေ၊ အိမျအကူတှနေဲ့ အလုပျရှငျတှကွေားက ပွဿနာအမြိုးမြိုးကို ကြှနျတျောတို့ မကွားခငျြမှအဆုံး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အိမျအကူတိုငျး၊ ကလေးထိနျးတိုငျး ကောငျးတယျလို့ မထောကျခံရဲသလို၊ အလုပျရှငျတိုငျးကလညျး အိမျအကူတှကေို ကွငျနာစှာ ဆကျဆံပါ့မယျလို့ ဘယျသူမှ အာမခံခကျြ ပေးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ယခငျက အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ကလေးထိနျးတဈဦးဟာ ကလေးမိဘတှမေရှိခိုကျ၊ အားရပါးရ ရိုကျနှကျနှိပျစကျခဲ့လို့၊ ကလေးသဆေုံးခဲ့ရဖူးသလို၊ စင်ျကာပူနိုငျငံမှာတော့ မွနျမာအိမျအကူမိနျးကလေးတဈယောကျကို အမြိုးမြိုး နှိပျစကျတဲ့ အိမျရှငျလငျမယားနှဈယောကျကိုတော့ ထောငျဒဏျတှေ ခမြှတျလိုကျပွီလို့ သိရပါတယျ။ ဒါဟာ လူတိုငျးရဲ့မတူညီတဲ့ အကငျြ့စာရိတ်တတှကေ ဖွဈပျေါလာတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှပေါ။
အခုလညျး ကလေးထိနျးအမြိုးသမီးတဈယောကျ သူမရဲ့ဇာတိကို ပွနျစရာရှိလို့၊ အိမျရှငျတှနေဲ့ သူမ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျခဲ့ရတဲ့ သမီးလေးတို့က လဆေိပျအထိ လိုကျပို့ခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ ကလေးထိနျးအမြိုးသမီးဟာ aရှာငျတခငျ ပွနျစရာရှိတာကွောငျ့ လယောဉျနဲ့ခရီးထှကျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကို သမီးလေး ကလေးထိနျးအမြိုးသမီးကို ငိုယိုပွီး နှုတျဆကျနတောပါ။
ကလေးမလေးဟာ နောကျတဈကွိမျ သူမခဈြတဲ့ ကလေးထိနျး အမြိုးသမီးကို မတှရေ့မှာ စိုးနပေုံရပါတယျ။ အပွီးအတိုငျ ပွနျတာမြိုးတော့ မဟုတျလောကျပါဘူး။ သူတို့တဈတှေ နောကျဆုံးနှုတျဆကျစကားပွောတော့ ကလေးမလေး အားရပါးရ ငိုကွှေးနှုတျဆကျတဲ့အတှကျ၊ အိမျအကူအမြိုးသမီးခမြာ မကျြရညျမဆညျနိုငျဖွဈပွီး၊ သမီးလေးကို ခဈြခငျကွငျနာစှာ ပှဖေ့ကျနှုတျဆကျနတော၊ မွငျရသူကို မကျြရညျမဆညျနိုငျ ဖွဈစပေါတယျ။
ဒီအဖွဈအပကျြလေးကို ကွညျ့ခငျြးအားဖွငျ့ ဒီအိမျအကူအမြိုးသမီးကို ကလေးမလေးက ဘယျလောကျအထိ သံယောဇဉျရှိတယျ၊ သူမရဲ့ အလုပျရှငျ ဇနီးမောငျနှံကလညျး သူမကို ဝနျထမျးတဈယောကျဆိုတာထကျ၊ မိသားစုဝငျတဈယောကျနဲ့မခွား ပွုစုစောငျ့ရှောကျတယျဆိုတာကို မွငျသာစမှောပါ။ မူလသတငျး Web မှာတော့ ဒီသတငျးလေးကို မဖတျခငျ၊ မကျြရညျသုတျဖို့ တဈရှူးရှာထားကွဆိုပွီးတော့တောငျ ညှနျးဆိုထားပါတယျ။
ခွဲစိတ်စရာမလိုတော့ပဲ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ သိသိသာသာသက်သာသွားသည့် ဆေးနည်း…!
ဒူလာ၊ ဆီးချို၊ လျှာကွဲ၊ ပါးစပ်ကွဲက အစ ရောဂါပေါင်း ၆၁ မျိုးအတွက် ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ ဆီးဖြူသီး ဗျာ…!
This Month : 39181
This Year : 234579
Total Users : 593603
Total views : 2725471